Doorashada Soomaaliya:- Sababta Aysan Beesha Caalamka U khasbi Karin Madaxda Soomaalida | Gaaroodi News
Doorashada Soomaaliya:- Sababta Aysan Beesha Caalamka U khasbi Karin Madaxda Soomaalida
April 7, 2021 | Published by: Tifaaftiraha
Dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay in madaxda Puntland iyo Jubaland aysan diyaar u aheyn in dalka ay ka dhacdo doorasho.
Dowladda ayaa sheegtay in wax lagu xumaado ay tahay in labada madaxweyne aysan ogoleyn doorasho.
“Xukuumaddu waxa ay maanta u caddayneysaa umadda Soomaaliyeed in labada Madaxweyne Goboleed ee Puntland iyo Jubaland aysan rabin in dalkaan ay ka dhacdo doorasho uu asaaskeeda yahay heshiiskii 17-kii September iyo is fahankii 16-kii Febraayo.”
“Waana wax laga xumaado in labadaas Madaxweyne ee Puntland iyo Jubaland ay noqdeen jid iyo jiho diid aan doorasho oggolayn”, ayuu yiri, wasiir Dubbe.
Maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho ku wada sugan dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo federaalka.
Balse, war saxaafadeed wadajir ah oo Puntland iyo Jubaland ay soo saareen maalmo ka hor inta uusan furmin shirka hadda fashilmay, waxay ku sheegeen in mas’uuliyiinta dowladda dhexe “ay xagal daacinayaan” shirkii loo ballan sanaa inuu ka qabsoomo magaalada Muqdisho.
“Waxaad mooddaa in lasoo dhaafay xilligii xukuumadda Soomaaliya ay ku jirtay ku meel gaarnimada oo laga caawinayay dal dhiska, nabadeynta iyo dib u mideyntiiba. Tan iyo doorashadii 2012-kii waxaad mooddaa in laga baxay ku meel gaarnimadii, sidaas darteedna ay tahay in la xurmeeyo gobanimada iyo madax bannaanida siyaasadeed ee Jamhuuriyadda,” ayuu yidhi Prof Bursaliid.
“Dal walba wuxuu ku sabsan yahay inuu Soomaalida ku xurmeeyo go’aannadooda masiiriga ah, sida uu Shiinuhuba caddeeyay. Laakiin haddiiba ay noqoto in talooyin gurracan la siiyo waa in loo qariyo oo si hoose oo saaxiibtinnimo leh loogu sheego ama si hanjabaad ah loogu sheego, haddiiba uu jiro dal tun buuran sida Mareykanka, Ingiriiska iyo Turkiga.”
‘Sababta aysan Beesha Caalamku waxba u qaban karin’
“Sabab ugu muhiimsan ee aysan Beesha Caalamku aanay dhinacyada isugu soo dhaweyn karin, wax weynna aysan u qaban karin waa inaanay dooneynin in danihii ay dalka ka lahaayeen xukuumadda markaas jirta ay wax kaga waayaan ama maamul laga yaabo barito in laftigiisa uu muhiimad gaar ah yeesho ay diidayaan inay aad u cadaadiyaan,” ayuu yidhi Barfasoor Bursaliid oo la hadlayay BBC-da.
Doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo waqtigoodu ahaa 8-dii bishii February ayaa ilaa hadda u xayiran inay qabsoonto doorashada ka horreysa ee baarlamaanka.
Maxaa dhici kara haddii madaxda Puntland iyo Jubaland ay ka baaqdaan
Madaxweyneyaasha Jubaland iyo Puntland, Axmed Maxamed Islaam (B) iyo Siciid Cabdullaahi Deni
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa shirka wada tashiga qaran, iyagoo sugayay inay kusoo biiraan madaxda Puntland iyo Jubaland.
Lama saadaalin karo waddada kale ee furan haddii uu fashilmo shirka wali qabsoomi la’ ee rajada laga qabo inuu Muqdisho ku dhex maro madaxda Soomaaliya, kaasoo ujeeddadiisu tahay in lagu dhammeystiro heshiiskii doorashada ee la gaaray 17-kii bishii September ee sanadkii 2020-kii